Global Voices teny Malagasy » Shina: Famonoana Any Am-pianarana Sy Tsy Fahatomombanana Ara-piarahamonina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Jolay 2017 19:32 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika miora
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fahasalamàna, Fitantanam-pitondrana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Tanora
(Fanamarihana: lahatsoratra tamin'ny May 2010)
Tao anatin'ny dimy herinandro dia nisy tranganà famonoana dimy tany am-pianarana tao Shina. Ankizy tsy manantsiny mpianatra avy amin’ny ambaratonga voalohany sy akanin-jaza avokoa ireo niharam-boina, raha toa ka olona niharan’ny tsy rariny teo amin’ny fiarahamonina ihany koa ireo mpamono olona rehetra. Avy amin'ny fiarahamonina ny olana amin’ny famonoana olona ankitsirano, kanefa, tenenina foana ny haino amanjery mba tsy hanadihady lalindalina kokoa ny tranganjavatra misy.
Inty ny famintinana ireo tranganà famonoana 5 
23 Martsa, namono ankizy 8 mpianatra eny amin’ny ambaratonga voalohany i Zheng Minsheng tao Nanping
12 Aprily, nisy lehilahy iray tao Hepu namono ankizy 8 mpianatra eny amin’ny ambaratonga voalohany
28 Aprily, nisy lehilahy iray tao Leizhou nanindrona antsy ankizy 16 mpianatra eny amin’ny ambaratonga voalohany
29 Aprily, nisy lehilahy iray tao Taixin nanindrona antsy ankizy 32 teny amin’ny akaninjaza
30 Aprily, nisy lehilahy iray tao Shandong Weifang nidaroka mpianatra 5 ary avy eo nandoro ny tenany ho faty
Nandika ny sasany tamin’ireo fanehoankevitra nivoaka teo no eo momba ireo tranganà famonoana ireo ny ChinaSmack. Maro no mino fa lasa ny ankizy indray no iharan’ny valifaty noho ny tsy rariny eo amin’ny fiarahamonina ary manome tsiny ireo mpamono olona noho ny famelezany ireo ankizy fa tsy ireo manampahefàna. Raha ny marina, nisy sary nandehandeha tao anaty aterineto, ary avy eo tamin'ny alàlan'ny imailaka rehefa nofafàna ilay izy, mampiseho teny filamatra napetraky ny ray aman-dreny teo ivelan'ny faritra fianarana any aminà akaninjaza iray. Mivaky toy izao izany: manana ny fototra niaingany ny tsy rariny ara-piarahamonina sy ny trosa, miodina miankavanana ianao dia mahita ny tranom-panjakana.
Misy idirany lalina amin'ny fiarahamonina ireo tranganjavatra ireo, mitovy amin'ny famonoan'i Yang Jia mpitandro filaminana . Araka ny fanambaran ‘i twocolds:
Tamin’ireny andianà tranga famonoana mampalahelo vao haingana ireny, nisafidy ny akaninjaza sy ny sekoly ambaratonga voalohany ho lasibatra ireo mpamono olona. Ao am-pon'ireo izay te-hamaly faty eo amin'ny fiarahamonina, lasa lamaody ny famonoana ny ankizy mpianatra satria izy ireo no tsy dia manohitra indrindra, amin’izay afaka mamono faran’izay betsaka indrindra sy miteraka ny tahotra ara-piarahamonina goavana indrindra izy ireo. Izany no fomba tena mahomby hamaliana faty eo amin'ny fiarahamonina. Ankoatra an'i Yang Jia, ny malemy no tena lasibatr’ireo mpamono olona. Tsisy fivoahana eto amin’ity fiarahamonina ity ka ny famonoana ny malemy no lasa hany fialan’izy ireo.
Tsy mahagaga raha nikoropaka nangataka an'ireo masoivohom-baovao sy vohikala lehibe ny sampandraharahan’ny fampielezankevitra mba tsy hametraka ireo vaovao ireo eo amin'ny pejy voalohany. Mazava ho azy fa eo ihany koa ny antony avy amin’ilay fampirantiana ao Shanghai araka ny nohazavain'i  Kai Pan tao amin’ny china/divide. Na izany aza, manome ny rariny ho an'ny ankizy ve ny governemanta? Mitsikera izany i Twocolds :
Voahara-maso ny vaovao momba ny famonoana tao amin'ny akaninjaza tao Taizhou. Samy ratsy fitotonana na ny fahaterahana na ny fahafatesan’ireny ankizy rehetra ireny. Anatin'ny rivo-pankalazàna, lasa feo manakorontana ny fahafatesan’izy ireo. Ny fantatsika fotsiny dia hoe 32 ireo olona naratra tamin'ny famonoana tao amin’ilay akaninjaza tao Taizhou. Nanamafy ny governemanta sy ny hôpitaly fa tsy nisy ny aina nafoy, kanefa ny tsaho dia nilaza fa maro tamin'izy ireo no maty. Iza no tokony inoako? Ndeha inoantsika ny governemanta, saingy maninona ary no raràny ny ray aman-dreny tsy hitsidika ny zanany?
Mamintina ny sasany amin’ireo idiran'ny fiarahamonina anatin'ilay “fihetsika mifono valifaty”  i Stan Abrams avy amin’ny china/divide, anisan'izany ny aretin-tsaina, ny elanelana eo amin'ny fidirambola sy ny tsy fahampian’ny fanarahamaso. Na izany aza, manamarika i Xu Zhiyong fa samy tsy mamaha ny olana na ny fanafenana azy na ny fanamafisana ny fanarahamaso:
Raha mitondra mankany amin'ny fanamafisana ny fomba fitantanana ara-tsosialy fotsiny ireny tranga nisesy ireny, dia tsy hahatratra ireo fotoana ahafahana manova ny fiarahamonina mihitsy isika. Tsy maintsy mirakitra hevitra lalina ara-piarahamonina ireny tranga ireny, raha tsy manaiky isika fa mety avy aminà zotra mifanohitra amin'izay no nivoaran'ny zava-nitranga. Raha mandinika ny raharaha araka ireo toetra 5 lehibe indrindra asehon'ny fampihorohoroana isika dia:
1. Ny fandroahana ankeriny, ny tsy rariny ara-piarahamonina sy ny tsy fahampian'ny fiarovana ny fandriampahalemana ara-piarahamonina no fototra sosialy niavian'ireo mpamono olona ireo. Nikotrikotrika tao an-dohan'ny olona manana olana ara-tsaina ireo olana rehetra ireo.
2. Manana toetra mahery fihetsika ireo nahavanon-doza. Raha miverimberina ny toejavatra toy izany, mety midika izany fa tena tsy milamina ny fiarahamonina.
3. Olona osa indrindra ao amin'ny fiarahamonina no lasibatra. Raha misy olona iray mahavita manapatra ny hatezerany aminà ankizy any amin’ny akaninjaza, dia tsy maintsy “manamarina” izany asa ratsiny izany aminà olana lehibe izy.
4. Ny dona – misy antony miafina matoa nivadika ho tahotra ara-piarahamonina ireny tranga ireny.
5. Ny fampidirana anaty fiarahamonina – raha misy fiarahamonina iray miala amin’ny fiatrehana ny zavamitranga lehibe toy izao ka tsy manana hery andinihana ilay zavamitranga sy hidirana anatin'ny fiarahamonina intsony, dia mety hanamafy ny fihetsehampo izay mahatonga ity zava-doza ity izany. Mbola loza noho ilay zava-doza izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/07/26/102117/
 tranganà famonoana 5: http://hi.baidu.com/800520/blog/item/98f4b9fb9d8ae62e4f4aeadd.html
 mino : http://www.chinasmack.com/2010/stories/chinese-school-attacks-netizen-reactions-taixing.html
 famonoan'i Yang Jia mpitandro filaminana: http://en.wikipedia.org/wiki/Yang_Jia
 sasany amin’ireo idiran'ny fiarahamonina anatin'ilay “fihetsika mifono valifaty”: http://chinadivide.com/2010/revenge-society-school-violence-policy-implications.html
 manamarika : http://xuzhiyong.fyfz.cn/art/617251.htm